ऋषिराम कट्टेल भन्छन्- ढिलै भएपनि अदालतले न्याय दियो [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन २३, २०७७, १६:१३
काठमाडौं- नेकपाको नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएपछि ऋषिराम कट्टेलले 'जे हुनुपर्ने थियो, त्यही भएको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले निर्वाचन आयोगले अन्याय गरे पनि सर्वोच्चले ढिलै भए पनि न्याय दिएको बताए। अर्को पक्षको नेकपाको विषयमा भने उनले अब सरकारी नेकपा भन्ने नरहेको बताए। 'निर्वाचन आयोगले उहाँहरुलाई (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई) तपाईंहरुको नाम खारेज भएकाले अर्को नाम ल्याउनुस् भन्ला', उनले भने।
आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७५ मंसिर २१ गते हालेको कट्टेलको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वाेच्चको फैसलापछि कट्टेलसँग नेपाल लाइभले गरेको छोटो संवाद:
सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
मेरो केही प्रतिक्रिया छैन जे हुुनुपर्ने थियो त्यही भयो। मलाई निर्वाचन आयोगले अन्याय गर्‍या थियो। अदालतले न्याय दियो, सक्यो।
जेहोस् ढिलै भएपनि अदालतले न्याय दियो हैन त?
अदालतले ढिलै भएपनि न्याय दियो। आफूलाई जिताई दिएपछि खुशी हुनै पर्‍यो।
त्यसो भए अब सत्ताधारी दल 'नेकपा' नहुने भयो ?
अब निर्वाचन आयोग जानुपर्ने होला। नयाँ नाम राख्नुपर्ने होला। यो नाम जुधेर सरकारी नेकपा रहेन। सत्ताधारी नेकपाले मिलेर बनाएका थिए। पुरानै पार्टी बनाउँछन कि नयाँ बनाउँछन् उनका कुरा भए। नेकपाबाट कतिपय सांसद पनि भएका छन्। त्यहीँबाट स्थानीय चुनाव जितेका छन्। राष्ट्रिय सभामा चुनाएका छन्। उनको भविष्य के हुने हो? निर्वाचन आयोगले तपाईको नाम खारेज भयो, नयाँ नाम लिनुस् भन्नेहोला।
अब तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
मेरो कुरा केही भएन। पार्टीले जे दाबी गरेको थियो त्यो पूरा भयो। नाम जुधेको हुनाले खारेज गरी पाउँ भनेर रिट हालेका थियौ। पार्टी चलाउनै पाउँदैन भन्ने कुरा भएन। जबरजस्ती सरकारी पार्टी बनेर आफ्नै कानुनको बर्खिलापमा दल दर्ता गरेका थिए। त्यो दलसँग नाम जुध्ने गरी दल दर्ता गर्न र चुनाव चिन्ह दिन पाइँदैन भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ। तिनिहरुले जबरजस्ती गरेर नेकपा राखे। निर्वाचन आयोगले बीचमा कोष्ठ राखेर भिन्न दलको मान्यता दिएको थियो। त्यही कुरा अदालतले मान्यता दियो। ठिकै भयो।
तपाईंको केपी ओलीसँग मिलेर जाने कुरा पनि आएको थियो। उता चार दलीय मोर्चामा जाने कुरा आइरहेको छ यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टी स्वतन्त्र छ। बाहिरको हल्ला केपी ओली, माधव नेपाल कता जान्छ भन्ने गर्छन्। माधव नेपाल वा केपी ओलीसँग मिल्ने भए, म आफैं त्यही पार्टीमा मिलेर पहिला काम गरेको थिएँ। फेरि फुटाएर अर्को पार्टी बनाउने थिएन। मैले रहरले पार्टी बनाएको होइन। उनीहरु सिद्धान्तच्यूत भए। कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडे। त्यसपछि नयाँ सिराबाट पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर बनाएँ।
हामीले अरु चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग रणनीतिक मोर्चा बनाएका छौं। वैचारिक रुपमा एक ढंगले प्रवर्द्धन गरिराखेका छौं। उनीहरुसँग संवाद, सहकार्य कार्यगत एकता र पार्टी एकतामा जाने भनेका छौं।